စက်တင်ဘာလထဲမှာ ရုံတင်ပြသခွင့်ရခဲ့တဲ့ Special9ရုပ်ရှင်
မြင့်မြတ်နဲ့ ထူးအယ်လင်းတို့ ပါဝင်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပါ။
တရုတ်ပြည်မှာ ခက်ခက်ခဲခဲ ရိုက်ကူးခဲ့ရတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကား မကြာခင် ပြသခွင့်ရတော့မှာ ဖြစ်လို့ ယုန်လေးတစ်ယောက်တော် တော့်ကို ပျော်နေပါတယ်။မြင့်မြတ်၊ ယုန်လေး ၊ ထူးအယ်လင်းနဲ့ နိုင်ဝမ်းတို့ ပါဝင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ Special9ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ကြီးဟာ မကြာခင်မှာ ရုံတင်ပြသတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အက်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းကို စောင့်မျှော်နေတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ဝမ်းသာစရာ သတင်းကောင်းတစ်ခုလို့ ပြောရမှာပါ။ မြင့်မြတ်၊ ယုန်လေး ၊ ထူးအယ်လင်းနဲ့ နိုင်ဝမ်းတို့ ပါဝင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ Special9ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဟာ မကြာခင်မှာ ရုံတင်ပြသတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘန်ကောက်မှာရိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်အတွက် သရုပ်ဆောင်ခေါ်နေတဲ့ ကိုပေါက်
Danger Zone လို့ နာမည်ပေးခဲ့ပေမယ့်လည်း ဆင်ဆာလူကြီးများက Special9လို့ နာမည်ပြောင်းပေးခဲ့တဲ့ ယင်းဇာတ်ကားဟာ စက်တင်ဘာ(၇) ၇က်နေ့မှာ ရုံတင်တော့မှာပါ။
ယုန်လေးကိုယ်တိုင် ဇာတ်လမ်းရေးသားထားပြီး ကိုယ်တိုင် ဒါရိုက်တာ လုပ်ထားတဲ့ Sepecial9ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ရုံတင်ခွင့်ရရှိတဲ့အတွက် သူအနေနဲ့အရမ်းကို ပျော်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။
"ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်း ဆိုပြီး ဘဝမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၉နှစ်က ပထမဆုံးစဉ်းစားတဲ့ကား . အခုတော့ အကောင်ထဲဖော်နိုင်ခဲ့ပြီ . ယုံယုံကြည်ကြည် အပင် ပန်းခံ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ပေးသော . မြင့်မြတ် . ကိုထူးအယ်လင်း Nine One . အပြင်ပါဝင်သော သရုပ်ဆောင်ညီအစ်ကို မောင်နှစ်မ များအားလုံး ယုံကြည်ပြီး စိတ်ကြိုက်ရုက်ကူးခွင့်ပေးသော ]Shwe Myanmar Filmproductionတို့ကို အထူးပင်ကျေးဇူး တင်ရှိပါကြောင်း ." ဆိုပြီး ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။
အင်းစိန်ကိုချစ်တဲ့ မြင့်မြတ် အကြောင်းပြောလာတဲ့ ယုန်လေး
Special9ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာ အက်ရှင်ကား စစ်စစ် ဖြစ်တယ်လို့ ယုန်လေးက ဆိုပါတယ်။ ယင်းဇာတ်ကားကို တရုတ်ပြည်မှာ ခက်ခက်ခဲခဲ ရိုက်ကူးခဲ့ရတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်တယ်လို့ ယုန်လေး ပြောပြထားပါသေးတယ်။
Special9ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ မြင့်မြတ်၊ ယုန်လေး၊ နိုင်းဝမ်း၊ ထူးအယ်လင်း၊ ထက်ယံ၊ သားသား၊ Ice Cold၊ Okka၊ ဆူဇီ၊ ခိုင်မြတ်သဇင်၊ စိုးနန္ဒာကျော်၊ ပန်းနုတို့အပြင် အခြားသော အနုပညာရှင်များစွာက ပါဝင်အားဖြည့်ပေးထားပါတယ်။ ယင်းဇာတ်ကားကို ဒါရိုက်တာ အောင်မြတ် နဲ့ စစ်သွေးတို့က ရိုက်ကူးပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယုန်လေးရဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်း ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ဆင်ဆာကျသွားတဲ့ အတွက် အရမ်းကို ဝမ်းသာလို့ နေကြပါတယ်။ယုန်လေးရဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား တော်တော်များများ ဆင်ဆာမကျသေးပေမယ့်လည်း ဒီဇာတ်ကားကြီး ဆင်ဆာကျသွားလို့ အနုပညာမောင်နှမတွေလည်း ဝမ်းသားလို့နေကြပါတယ်။
ယုန်လေးက သူကိုယ်တိုင်ရေးသားတဲ့ ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ်ရေးကြသူများ ၁ ၊ Original Gangster 1 စတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့သူ ပါ။ ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကနေတဆင့် ပရိသတ်အားပေးမှုလည်း ပိုမိုရရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။